Basikety – CACC: raraka teo amin’ny ¼ – dalana ny MB2All | NewsMada
Efa nampoizina ny valin-dalao ho an’ny ekipa malagasy, nandritra ny lalao ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika, ho an’ny ekipa tompondaka sokajy vehivavy, omaly. Niondrika teo anatrehan’ny Inter Clube avy any Angola ny MB2All, tany Maputo, Mozambika.
Isa mavesatra no nandavoan’ny Angola an’i Madagasikara. Ny ekipan’ny Angola izay efa fanta-daza amin’ny fahaizana sy ny fananana haavo teknika ambony mihoatra amin’ireo ekipa mpifaninana rehetra nandray anjara tamin’ity fifaninanana ity. Etsy ankilany, ny Mb2All izay mbola vao sambany no nandray anjara tamin’ny lalao goavana toy izao, ka tsy dia nahagaga ny vokatra. Tsy nifan-danja rahateo koa ny halavana sy ny vatana teo amin’ny malagasy sy ny Angolais. Na izany aza, nahafa-po ny mpanazatra ny zava-bitan’ny ekipa malagasy.
Raha hiverenana ny lalao omaly, hatrany am-piandohan’ny lalao dia efa nanatombo tamin’ny isa ny Inter Clube. Nitarika tamin’ny isa 20 no ho 7 ity ekipa ity tamin’ny ampahefa-potoana voalohany. Nanao izay ho afany ny MB2All nanenjika kanefa very maina izany satria nifanesy hatrany ny isa ho an’ny Angola ary nahitana elanelana maro mihitsy. 39 no ho 17 no nisarahan’ny roa tonta teo am-pialana sasatra.
Vao maika nihanitombo ny herin’ny Inter Clube tamin’ny ampaham-potoana faharoa. Isa maromaro no tafiditra. Tsy afa-bela nanoloana azy ny MB2All ka niala maina teo am-pamaranana ny lalao. Isa mavesatra 84 no ho 46 no nisarahana ka nivoaka ho mpandresy ny ekipan’ny Angola, ekipa tompondaka imbetsaka nandritra ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika.
Tapitra hatreo, araka izany, ny lalan’ny ekipa malagasy tamin’ity fifaninanana ity. Mbola mila manao fanazarantena hatrany anefa hiatrehana ny lalao fiadian-toerana. Nahafahana naka lesona sy nahazoana traikefa ny lalao izay natao tany Maputo, Mozambika ity, raha ny nambaran’ny mpanazatra, Rakotonanahary Ndranto. Nahafahana ihany koa namantatra ny haavo teknika ny mpilalao malagasy, indrindra taorian’ny fiatrehana ny fifaninanana N1A, farany teo.